eHimalaya Online || News from nepal » को हुन त यी युवक जो पुजाको मन जित्न सफल भए ?
को हुन त यी युवक जो पुजाको मन जित्न सफल भए ?
२०७८ साउन १० गते आईतबार ०५:०२
चलचित्र बजार गसिपको क्षेत्र हो । पर्दा अगाडि देखिने कलाकारको विषयमा दैनिक रुपमा आउने गसिप कहिलेकाहीं उनीहरुका लागि चर्चाको राम्रै खुराक बन्छ । नायिका पूजा शर्मा चलचित्र क्षेत्रमा...
चलचित्र बजार गसिपको क्षेत्र हो । पर्दा अगाडि देखिने कलाकारको विषयमा दैनिक रुपमा आउने गसिप कहिलेकाहीं उनीहरुका लागि चर्चाको राम्रै खुराक बन्छ ।
नायिका पूजा शर्मा चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै फिल्मी गसिपको मुख्य केन्द्रमा छिन् । चलचित्रको पर्दामा उनी जोसँग काम गर्छिन्, उनै नायकसँग उनको नाम जोडिन्छ । सुदर्शन थापा, प्रदीप खड्का, पल शाहदेखि आकाश श्रेष्ठसँग पूजा शर्माका नाम जोडिए ।
उनै पूजा विगत केही दिनदेखि फेरि चर्चामा छिन् । तर यसपटक उनको नाम जोसँग जोडिएको छ ती युवकको सम्बन्ध चलचित्र क्षेत्रसँग छैन । ती युवक व्यापारी युद्ध बानियाँ हुन् । पूजा र युद्ध केही दिनदेखि टक अफ दी टाउन बनेका छन् ।
नायिका पूजा शर्मा र युद्ध बाँनियाको भेटघाट गत वर्षको फागुनमा भएको हो । पूजाकै दिदीहरुका कारण युद्धसँग उनको भेटघाट भएको हो । हेटौंडाका युद्ध ललितपुरको सातदोबाटोमा बस्दै आएका छन् ।
पूजाको चलचित्र करिअरको बारेमा युद्ध निकै चासो राख्छन् । आफन्तका कारण भेटघाट भएपछि पूजा र युद्ध एक अर्काको राम्रो साथी बनेका छन् । भेट भएको करीब ६ महिनामा पूजा र युद्धले एक अर्काको भविष्यको योजना मात्र साटेका छैनन्, एक-अर्कालाई बुझिरहेका छन् ।
पूजा र युद्ध अहिले नै यो सम्बन्धलाई प्रेमको नाम दिन चाहँदैनन् । तर, उनीहरु एक-अर्काको नजिकको साथी भने भइसकेको बुझिएको छ । नायिका पूजा शर्माले गत वर्षदेखि नै आफ्नो बिहेको उमेर भइसकेको प्रतिक्रिया मिडियामा दिइरहेकी छिन् ।
युद्धको तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै उनको सुगठित शरीरको चर्चा पनि सामाजिक सञ्जालमा शुरु भएको छ । जिममा प्रयोग हुने प्रोटिन लगायतका खाद्यान्नको व्यापार गर्दै आएका युद्ध आफू पनि जिम क्रेजी छन् । नेपाली चलचित्रको कुनै नायकभन्दा युद्ध कम नभएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा भेट्न सकिन्छ ।
पूजाले हालै मात्र ललितपुरमा नयाँ घर बनाएकी छन् । नयाँ घरमा चाँडै नै बसोबास शुरु गर्न लागेकी पूजा बिहेको मुडमा छिन् । पूजा र युद्धको मित्रता बलियो रुपमा अगाडि बढेको छ । कुनै दिन यो जोडीको प्रेम र बिवाहको कुरा बाहिरिए अनाैठो नमान्दा हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ साउन १० गते आईतबार ०५:०२